Yeau kɔɔ bepɔw so na ɔfrɛɛ wɔn a wayi wɔn no baa ne nkyɛn. Oyii wɔn mu dumien a daa wɔne no bɛnantew, na wɔakɔka asɛmpa no, na wɔatu ahonhommɔne nso.
Dumien a oyii wɔn no din ni:
Simon, a ɔtoo no din foforo Petro.
Sebedeo mma Yakobo ne Yohane, a ɔtoo wɔn din Boanerges, a ase ne “aprannaa mma”.
Wɔn a wɔka ho nso ni: Andrea,
na Yuda Iskariot a oyii no mae no.